मोबाइल हुन सक्छ ह्याक, चोरिन सक्छ व्यक्तिगत डेटा, कसरी राख्ने सुरक्षित ? – Everest Dainik
मोबाइल हुन सक्छ ह्याक, चोरिन सक्छ व्यक्तिगत डेटा, कसरी राख्ने सुरक्षित ?
क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले गोप्य रुपमा फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू को व्यक्तिगत विवरण चोरी गरेको समाचार आए यता संसार भरी नै डेटा सुरक्षा सम्बन्धी बहस सुरु भएको छ ।
हुन त वर्तमान समयमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रुपमा गोप्य राख्नु असंभव जस्तै हो तर यस्ता विवरण सबैको पहुँचमा सहजै पुग्ने हो भने यसले व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षामा पनि तमाम प्रश्नहरू खडा गरिदिन्छ ।
सामान्यतया पारदर्शिता सभ्य समाजको परिचायक हो तर व्यक्तिका केही जानकारीहरू गोप्य नै राख्नु पर्ने हुन्छ । आजभोलि संसारका कतिपय देशमा क्यासलेस अर्थतन्त्रको अभ्यास सुरु गरिंदैछ ।
यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्पूर्ण सम्पत्तिको साँचो भनेको हाम्रो डाटामा नै हुन्छ । कथंकदाचित हाम्रो मोबाइल या ल्यापटपमा राखिएको हाम्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक खाता सम्बन्धी कुनै पनि गोप्य सूचना चुहिएको खण्डमा हामीले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । र, कुनै अभ्यस्त ह्याकरका लागि यो त्यति गाह्रो काम होइन।
त्यति मात्र हैन सामाजिक संजालमा हामीले कसैसँग गरेका अन्तरङ्ग वार्तालापहरू पनि सार्वजनिक भइदिएर हाम्रो प्रतिष्ठा नै गुम्ने डर समेत त्यत्तिकै रहन्छ ।
यदि हामी कालान्तरमा कुनै उच्च सार्वजनिक पदमा पुग्यौं भने कुनै ह्याकरले त्यस्ता अन्तरङ्ग वार्तालापहरू भविष्यमा हामीलाई दुःख दिन प्रयोग गर्न सक्छ ।
अचेल फिंगरप्रिंट सेन्सर वाला फोनको फेसन छ । यसलाई फोन अनलक गर्न पासवर्डको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर फिंगरप्रिंट र पासवर्डमा ठुलो अन्तर छ ।
पासवर्ड चोरी भएको खण्डमा त्यसलाई बदल्न सकिन्छ तर फिंगरप्रिंट भने कुनै पनि हालतमा फेर्न सकिन्न किन प्रत्येक मान्छेको पृथक र मौलिक फिंगरप्रिंट हुने गर्दछ जुन बदल्न सकिन्न ।
कुनै ह्याकरले हाम्रो फिंगरप्रिंट चोरेको खण्डमा उसले सयौं किलोमिटर टाढाबाट हाम्रो फोनमा रहेका जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ ।
२०१४ मा एउटा ह्याकरले बायोमेट्रिक जानकारीहरू असुरक्षित हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न जर्मन रक्षामन्त्रीको नै फोन ह्याक गरेको थियो । उनले फोनलाई नछोइकनै टाढाबाट लिएको तस्बिरबाट आवश्यक डाटा प्रप्त गरेर बिना पासवर्ड उनको फोन ह्याक गरिदिएका थिए ।
यसो गर्नका लागि उनीसँग कुनै अत्याधुनिक ग्याजेट थिएन । एउटा राम्रो क्यामेराले टाढैबाट लिइएको फोटो र इन्टरनेट कनेक्सन युक्त कम्प्युटर छ भने टाढैबाट कसैको पनि फोन ह्याक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ती ह्याकरले बताइदिएका थिए ।
आजभोलि लगभग सबै एंड्रोइड फोनहरूमा डेटा इन्क्रिप्त गर्ने अप्सन राखिएको हुन्छ । इन्क्रिप्सनलाई बिट एकाइमा व्यक्त गरिन्छ ।
सामान्य सुरक्षाका निम्ति एक सय २८ बिट पर्याप्त हुन्छ तर सेना तथा सरकारहरू दुई हजार ४८ बिटसम्मको इन्क्रिप्सनको प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
इन्क्रिप्सनलाई ह्याक गर्नु सामान्य अवस्थामा सम्भव नै छैन । कुनै डेटा सुरक्षित राख्न एक सय २८ बिटको इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्नुको तात्पर्य हो त्यो डेटा १२८x१२७x१२६x१२५x……..३x२x१ वटा कम्बिनेसनमा कोड गरिएकोप हुन्छ ।
अर्थात् यति धेरै कम्बिनेशन मध्ये कुनै एकबाट मात्रै डेटा खुल्नेछ । त्यसैले बिना सही पासवर्ड यस्तो फाइल खोल्न अरबौं खरबौं कम्बिनेसनहरू तैप गर्दै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ जुन असम्भव प्रायः छ ।
यदि हाम्रो कम्प्युटर या ल्यापटप इन्टरनेटसँग जोडिएको छ भने यस्तो अवस्थामा वेबक्याममा टेप टाँसेर त्यसलाई बन्द गर्नु श्रेयस्कर छ ।
कतिपय ह्याकरहरूले कम्प्युटरको वेबक्याम नै ह्याक गरिदिने भएकाले हामीमाथि सजिलै निगरानी राख्न सक्छन् ।
कतिपय इन्टरनेट ब्राउजरहरूमा इन्कग्निटो मोड हुन्छ जसले हाम्रा जानकारी गोप्य राख्ने कुरा गरे पनि यसले पनि हाम्रो पासवर्डको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन ।
इन्कग्निटो मोडले हाम्रो विस्तृत विवरण र ब्राउजिङ हिस्ट्री मात्रै सेभ नगर्ने हो । यदि हामीलाई सुरक्षित इन्टरनेट चाहिएको हो र कुनै ह्याकरले सजिलै हाम्रो लोकेसन पत्ता नलगाओस् भन्ने हो भने टोर एक्सटेन्सन वाला ब्राउजर र भिपिएनको प्रयोग गर्नु सुरक्षित हुने गर्दछ ।
ट्याग्स: #Techrest, data, data security, encrypt, phone hack